Makiyi ekunyatso kurwisa kupatira | Bezzia
Makiyi ekunyatso kurwisa kupatira
Susana Garcia | | Matipi ehutano, Utano
El Kuzvimbirwa idambudziko rinogona kumuka nguva nenguva kana kuti icho chingave chinhu chisingaperi, nekuti kune vanhu vanowanzo kutambura nedambudziko iri. Kana isu tiinayo nenzira yakakodzera, isu tinongofanirwa kudzora kudya uye tsika kuti tione zvakashata, kana chiri chinhu chakajairika uye tichiona kuti mishonga haishande, inguva yekuenda kune nyanzvi. Nekudaro, ikozvino isu tichakupa makiyi ekurwisa kupatirwa zvinobudirira pakutanga.
El Kuzvimbirwa kunogona kuoneka nekuda kwezvikonzero zvakawanda, kubva pakudya kwakaipa kusvika kunetsekana kana matambudziko akasiyana emukati. Izvo zvakakosha kuyedza kurwisa dambudziko iri. Kana isina kukomba, inogadziriswa zviri nyore nechikafu chakakodzera uye nhungamiro, asi kana izvi zvikasaitika isu tichafanirwa kutsvaga chikonzero chazvo, nekuti chingave chinhu chakakomba.
1 Inwa zvinwiwa
2 Zvibereko zvinopesana nekuzvimbirwa
3 Balance kudya
4 Akadzikama maawa
5 Ita maekisesaizi
6 Dzivisa kushandisa laxatives
Imwe yei zvinhu zvaunofanirwa kuita kunwa zvinwiwa zvakawanda. Dambudziko rakajairika kana paine kuzvimbirwa nderekuti chetsoka haina hunyoro uye ndosaka ichigara mumatumbu. Saka kana tikanwa zvakaringana, izvi zvichave nemabatirwo akafanira. Mvura yakakosha kwazvo mumuviri wedu uye ndosaka zvichikosha kunwa anosvika maviri litita emvura pazuva pakati pemvura, infusions nemajusi echisikigo. Izvi zvinotibatsira muzvinhu zvakawanda, nekuti hazvisi zvirinani chete kumatumbu ekufambisa asi zvinobatsirawo kuchengetedza ganda, kuchengetedza huwandu hwemvura mumuviri kana kudzora kugaya, saka ndiyo imwe yemakiyi ehutano akakosha atinofanira kuenderera.
Zvibereko zvinopesana nekuzvimbirwa
Zvibereko zvine zvakawanda zvakanaka zvinhu. Kune rimwe divi, vanotipa zvinonaka, asi zvakare vane hutano hwakanaka, sezvo hwavo zvemukati zvemvura zvakakwirira kwazvo uye vane mavitamini mazhinji. Panyaya yekuzvimbirwa, isu tichafanirwa kutsvaga kune avo vane fiber yakawanda uye vari nani kurwisa iyo. Zvimwe zvezvinonyanya kukurudzirwa ipuramu, orenji uye kiwi. Zvibereko izvi zvichatibatsira kunyatsorwisa kuzvimbirwa kana tikazviwedzera pakudya kana pakudya kwekuseni, kutanga zuva.
Izvo zvakakosha kuti kudya kwedu kwakaringana uye kunotipa zvinovaka muviri zvinodiwa. Kudya kwakanaka kunoita kuti dumbu rishande zvirinani uye kunatsiridza hutumbu hwekufamba. Kana zuva rega rega tichiwedzera inodiwa mvura, faibha uye zvinovaka muviri, muviri wedu unoshanda zvirinani. Dzivisa chikafu chakaita seshuga uye chikafu chakagadziriswa, nekuti izvi zvinokuvadza uye zvinobatsira mukuzvimba mumuviri.
ari masekondi asingadzorwe uye chikafu chinoshanduka chinokonzera kupatira kuoneka, nekuti shanduko idzi dzinogona kutinetsa. Ndosaka zvakanakisa kuti isu tichiedza kuita masisitimu akasarudzika, nezvikafu panguva imwechete. Nenzira iyi, muviri unozomisikidza tsika iyo ichave nyore kupindura zvakasununguka.
Gadzira mutambo unogona zvakare kubatsira matumbo edu kutama. Mitambo inosimudzira mhasuru uye inoita kuti muviri ushande zvakanyanya uye kutenderera zvirinani. Zvese izvi zvinokanganisa maitiro ekugaya uye anotevera matumbo ekufambisa, saka kana isu tichirovedza zuva nezuva tinozoonawo mabhenefiti mune izvi.
Dzivisa kushandisa laxatives
Kana zvisina kunyatso kudikanwa kana ivo vasina kuisirwa nyanzvi, ndizvo zvirinani kwete kungotanga kutora laxatives. Zvakanaka kuti ura uzvishande wega zvakasununguka, uye kuenderera mberi kwekushandisa laxatives kunogona kuita kuti ishande kunyange zvishoma. Ndokusaka usati watendeukira kwavari unofanirwa kuedza zvimwe zvinhu zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Makiyi ekunyatso kurwisa kupatira